फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दै : हेड टु हेडमा को बलियो ? – Janasamsad
फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दै : हेड टु हेडमा को बलियो ?
आइतबार, आश्विन २५, २०७७ १५४१५०
एजेन्सी । नेसन्स लिग फुटबलमा विश्व विजेता फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दै छन् । समूह सीमा रहेका दुवै टोली लिगको तेस्रो चरणको खेलमा भिड्न लागेको हुन् ।
खेल फ्रान्सको घरेलु मैदानमा स्टाडे डी फ्रान्समा नेपाली समयअनुसार राति साढे १२ बजे सुरु हुनेछ । सुरुवाती दुई खेलमा जित निकालेका दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा छन् । स्टार खेलाडीले भरिएका दुवै टोली लगातार जित निकाल्न चाहन्छन् । तर, दुवै टोलीलाई एक-अर्काविरुद्ध जित निकाल्न त्यति सहज भने हुने छैन ।
फ्रान्सको अग्रपंति एन्टोइन ग्रिजम, केलियन एम्बाप्पे र ओलिभर जिरुडले सम्हाल्नेछन् । यता पोर्चुगल अग्रपंति भने कप्तान क्रिस्टिायानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स र बर्नान्डो सिल्भाले सम्हाल्ने छन् । एम्बाप्पे फ्रान्सका लागि मुख्य हतियार हुनेछन् भने पोर्चुगलका लागि कप्तान रोनाल्डो मुख्य हतियार हुनेछन् ।
स्विडेनसँगको साँघुरो जितमा एम्बाप्पेले निणर्ायक गोल गरेका थिए । क्रोएसियासँगको दोस्रो खेलमा भने उनी कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण टोलीबाहिर थिए । उक्त खेल फ्रान्सले ४-२ ले जितेको थियो ।
यता क्रोएसियासँग लिगको पहिलो खेल गुमाएका रोनाल्डोले दोस्रो खेल खेलेका थिए । उनले स्विडेनसँगको दोस्रो खेलमा दुई गोल गर्दै राष्ट्रिय टोलीका लागि शतकीय गोलको आँकडासमेत पार गरेका थिए ।
हेट टु हेड
हेट टु हेडमा फ्रान्स र पोर्चुगलमा फ्रान्स निकै नै बलियो देखिएको छ । १९२६ देखि आमने-सामने भएका यी दुई टोलीले हालसम्म २५ खेल खेलका छन् । तर, २५ खेल मध्ये् १८ खेलमा फ्रान्स विजयी भएको छ । पोर्चुगलले ६ खेल जित्दा एक खेल बारबरीमा रोकिएको छ ।
१९७८ देखि २०१५ सम्म आइपुग्दा दुवै टोली १० खेलमा आमने-सामने भएका थिए । जसमा दशवटै खेल पोर्चुगलले गुमाएको छ । दुवै टोलीले पछिल्लोपटक २०१६ मा भएको यूईएफए युरोपियन च्याम्पियनसिपमा खेलेका थिए । उक्त खेल पोर्चुगलले १-० ले जितेको थियो । चार वर्षपछि यी दुई टोली आमनेसामने हुन लागेका हुन् ।
कोलकाताद्वारा दिल्लीलाई विशाल लक्ष्य
झापा । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा सुनिल नर...